ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ…အာတီသဲရယ်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ…အာတီသဲရယ်….
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Nov 8, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Different, Travel | 26 comments
သမီးလေ.. ပို့စ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်… ခရီးသွားလုပ်ငန်းထဲက S တစ်လုံး ဆိုတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ… လှည်းတန်းမီးပွိုင့်လမ်းဆုံမှာ လမ်းလယ်ခေါင်မှာ ကွေ့ကြောယူထားတဲ့ ကားကို အတင်းငှားပြီး ပါလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို အသည်းအသန် အရင်တက်ခိုင်းပြီး ပြာပြာသလဲ ကားငှားစီးတဲ့ အမျိုးသမီးအကြောင်း…. ဂရုစိုက်ကြပါ…. ဧည့်ဝတ်ကျေကြပါ.. စည်းကမ်းတော့ မဖောက်နဲ့ပေါ့… နိုင်ငံခြားသား မပါလာရင်တောင် နားလည်ပေးနိုင်သေးတယ်… အခုက နိုင်ငံခြားသားရှေ့မှာ ကိုယ်က ပိုဂရုစိုက်ပြီး စည်းကမ်းလိုက်နာပြရမှာကို… စည်းကမ်းဖောက်ပြနေလို့.. အသည်းနာတယ်…. (အာတီသဲ မဟုတ်ဝူးနော်..)
လမ်းပေါ်မှာ၊ အထူးသဖြင့် Tour sites တွေမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ အခွင့်ထူးခံနေကြတဲ့ ကိစ္စတွေ… သမီးတို့လည်း အသည်းနာပါတယ် အာတီသဲရယ်… ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါ Tour Company တွေနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောရမယ်…
Tour Company ဆိုတာ ဧည့်သည်က ငါ မြန်မာနိုင်ငံကို လာလည်ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စာကို လက်ခံရရှိချိန်ကအစ နောက်ဆုံး departure ထွက်ပြီး ပြန်သွားတဲ့အထိ သူတို့ရဲ့ ကိစ္စအဝဝကို ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားရတဲ့အထိ တာဝန်ကြီးတဲ့သူတွေပါ… သူတို့ သွားချင်တဲ့နေရာ၊ သူတို့ လိုချင်တဲ့ service၊ သူတို့ တတ်နိုင်တဲ့ ငွေပမာဏ စတဲ့ ဧည့်သည်ရဲ့ inquiry နဲ့ အခန်းပြည့်တွေကြားက booking ရမယ့်အခန်း၊ အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့ flight တွေကြားက ခရီးစဉ်ရဲ့ Timing၊ လိုအပ်ချက်များနေတဲ့ guide availablity တွေကို ချိန်ပြီး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးရပါတယ်… ကဲ..ဟိုဘက် ဒီဘက် အဆင်ပြေပြီဆိုပါတော့… ငွေစကားက စပြောရရော.. ဟိုတယ်တွေက ပိုက်ဆံတောင်းပြီလေ… ငွေပေးမှ confirmation letter ကို ပို့တယ်… ငွေမပေးရသေးခင်အထိ Available ဆိုတာမျိုးပဲ ပေးပြီး အခန်းကို အချိန်မရွေးပြန်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်… ပေးပြီးသား စရံက အဆုံး… ပြန်မအမ်းဘူး… ဆိုတော့ ဧည့်သည်က confirm လို့ ပြောရုံရှိသေး.. သမီးတို့က ပိုက်ဆံလှမ်းတောင်းရပြီ… နင်ငွေလွှဲမှ ငါ booking status ပို့ပေးလို့ရမယ်.. မဟုတ်ရင် ဟိုတယ်တွေက confirm မပေးဘူးဆိုတာတွေ ပြောရရော… ကဲ.. ဟုတ်ပြီ .. ပိုက်ဆံလွှဲလိုက်ပြီ… မပြီးသေးပြန်ဘူး… flight time က တစ်ချိန်လုံးပြောင်း… မနက်အစောလေယာဉ်ကို မလိုချင်လို့ မနက် (၁၀) နာရီလေယာဉ်နဲ့တောင်းရင် schedule ထဲမှာ ရှိပေမယ့် အနားနီးရင်တော့ မနက်အစောချိန်ကို ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့.. မြန်မာနိုင်ငံကို လာလည်တဲ့သူတွေကို အင်မတန်သနားမိတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ပိုက်ဆံတွေလည်း ပေးပြီးပြီ… အခန်းတွေလည်း ရပြီးပြီ… ဒါပေမယ့် မပြီးသေးဘူး.. အဲဒီ ဟိုတယ်တွေကို မကြာခဏဖုန်းဆက်ပြီး reconfirm လုပ်ရတယ်… အဲဒီနေ့ အဲဒီရက်မှာ တင်ထားတဲ့အခန်းလေး ရှိပါတယ်နော်.. reconfirm လုပ်တာပါနော်.. ဘာညာနဲ့…
ကြုံဖူးတယ်လေ.. booking လည်း တင်ထားတယ်… ပြန်စာလည်း ရထားတယ်.. ဒါပေမယ့် ဧည့်သည်က ညဘက်ကြီး လေယာဉ်ဆိုက်လို့ check-in ဝင်မှ အခန်းမရှိဘူး လုပ်တာမျိုးတွေ.. သူတို့က sorry တစ်လုံးတည်းနဲ့ ပြီးတယ်… တာဝန်ယူထားရတဲ့ Tour Company က ခေါင်းခြောက်ရော…. ဒီ ဧည့်သည်တွေ ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားလို့လည်း မရ… ဂိုက်လား.. ဒါ ရုံးရဲ့ တာဝန်လေ… ရုံးလုပ်တာ.. သူလုပ်တာမဟုတ်.. သူ့မှာ တာဝန်မရှိ…. ဟိုတယ်ပြီးတော့.. လေယာဉ်.. သူတို့လည်း တစ်ချိန်လုံး reconfirm ပဲ.. မနက် (၆) နာရီ လေယာဉ်စီးမယ့် ခရီးသည်ကို ညနေလေယာဉ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီး ညသန်းခေါင်မှ ခပ်တည်တည်ဖုန်းဆက်ပြောတဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းလူတွေလည်း ရှိသေး… ဘယ်အချိန် ဘာဖြစ်မယ်မှန်း မသိလို့ ဒီလိုအချိန်တွေဆို ရုံးတောင် မပိတ်ရဲဘဲ ပိတ်ရက်တွေမှာပါ ရုံးတက်နေရတဲ့အဖြစ်…. ဂိုက်လား.. လေယာဉ်ချိန်ပြောင်းတာ ဂိုက်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ.. အဲဒါ ရုံးကလုပ်တာ… ရုံးနဲ့ရှင်း…
နောက်ဆုံး..နောက်ဆုံး… ခရီးစဉ်ဆုံးသွားလို့ ဧည့်သည်က departure ထွက်သွားပြီဆိုမှ ဟင်း ချနိုင်တာ..ဒါတောင် agent က လာတဲ့ ဧည့်သည်ဆိုရင် သူတို့ဆီပြန်ရောက်ရင် ဘာ complain တက်လို့ ဘယ်လိုပြန်ရှင်းရဦးမလဲဆိုတာ ပူရသေး…
လာပြီ.. ဂိုက်…. ဂိုက်လုပ်ရတာလည်း မလွယ်ပါဘူး.. direct service ကိုး… Company က ကဂျိုးကဂျောင် လုပ်ရင် ဧည့်သည်က သူ့ကို အရင် complain တက်တာလေ…. သူ့နေရာကလည်း မလွယ်ဘူး.. ဧည့်သည်က မနက်ဖြန် ရောက်တော့မယ် ဆိုရင် ဒီနေ့လို နေ့မျိုးမှာ ဂိုက်က ရုံးကို လာတယ်… ဟိုတယ်ဘောက်ချာ၊ လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ခရီးစဉ် detail စတာ စတာတွေကို ပေးတယ်… ထူးခြားချက်တွေရှိရင် ပြောပြတယ်… နောက်နေ့ ဧည့်သည် စရောက်တဲ့အချိန်က စလို့ … ဧည့်သည် ပြန်သွားတဲ့အထိက ဂိုက်က ရုံးရဲ့ တာဝန်ခံပဲ… ရုံးက ဘယ်သူကမှလည်း ဧည့်သည်လည်တဲ့နောက်ကို မလိုက်ကြဘူး… ဘယ်နေရာကို အရင်လည်ပြီး ဘယ်ကို နောက်မှလည်တယ်.. ဘယ်နေရာမှာ ကားရပ်တယ်… ဘယ်နေရာမှာ ဘာလုပ်တယ် ဆိုတာကတော့ ဂိုက်ရဲ့ အာဘော်တွေ… ကားသမားတောင် ဂိုက်ပြောတာ လုပ်ရတာ… ကြောက်ရတယ် အာတီသဲရဲ့.. သမီးတို့လည်း ကြောက်ရတယ်… ဒီအချိန် သူတို့က စင်ပေါ်ကလေ.. နင်တုိ့ ရုံးနဲ့ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဂိုက်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာ ပြောချင်တာတွေတောင် ပြန်မျိုချရတယ်… ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရုံးကို complain သလောက် ဧည့်သည်ကျ service အပြည့်ပေးတာလေ…
ရုံးက ဆွဲပေးတဲ့ ခရီးစဉ်က အဆင်မပြေဘူးတဲ့… အာတီသဲရယ်… ရုံးမှာ တစ်ချိန်လုံးထိုင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့.. (ခရီးထွက်ဖို့တောင် အခြေအနေမပေးတဲ့) ရုံးက လူတွေက တစ်ချိန်လုံး ခရီးထွက်နေတဲ့ (တစ်နေရာတည်းကိုပဲ တစ်လမှာ နှစ်ခါလောက်ရောက်နေတဲ့) ဂိုက်တွေလောက် ခရီးလမ်းကြောင်းကို သိပါ့မလားလို့…. အဆင်မပြေရင်ပြောပါ…ပြင်ပေးပါမယ့်.. ဒါပေမယ့် အချိန်လေးတော့ မီပါစေပေါ့… ရုံးကိုလာတယ်.. program ကို ပေးတယ်… ဒါလေးတော့ အဆင်မပြေဘူး… ဒီလိုလေး ပြင်ရင်ကောင်းမယ်.. ပြောပါ… ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပေးပါမယ်… ဧည့်သည်က ထွက်လာနေပြီဆိုရင်တောင် ရောက်ရောက်ချင်း ပြောပြပေးလို့ ရပါတယ်… ဧည့်သည်ဆိုတာမျိုးက ကြိုသိထားရင် လက်ခံပေးကြပါတယ်… ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ်က ဂိုက်ပဲ…. စကားလုံးဆိုတာ ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲမှာ ရှိတာပါ… မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း၊ ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းက ကိုယ်ပြောမှ သူသိရတာပါ… မဟုတ်ဘူး အာတီသဲရယ်.. နင်တုိ့က ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ.. ဒီနေရာကို သွားလို့မရဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား.. မသိဘဲနဲ့ ဘယ်လိုရောင်းနေကြလဲ.. ဘာညာနဲ့.. ဘုရားစူးပါရစေရဲ့… ပြန်ပြောချင်တာ ပါးစပ်ကို ယားနေတာပဲ..မျိုချထားရတယ်… သူတို့က ဧည့်သည်နဲ့တွေ့တဲ့ ရက်ကလေးပဲ ခေါင်းပူရတာပါ.. သမီးတို့က မလာခင် ဟိုး ပဝေသဏီကတည်းက ရောက်လာပြီးလို့ ပြန်သွားတဲ့အချိန်အထိ ဗြဟ္မာဥိးခေါင်းကြီးကို ထမ်းထားရတဲ့အဖြစ်…ကျားပေါက်သီချင်း ဆိုလိုက်ချင်တယ်.. နားလည်ကြပါ ~ နားလည်ကြပါ…
အာတီသဲရေ..အလုပ်လုပ်နေရင်း ဒီစာကိုရေးလိုက်တာ.. ဒီလောက်နဲ့ ရပ်လိုက်ဦးမယ်… လမ်းပေါ်က နိုင်ငံခြားသားတွေ လုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေတာ Tour Company နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတာလေး..နားလည်ပေးပါနော်.. သိချင်ရင် ထပ်မေး.. ကွန်မန့်ထဲမှာ ဖြေပေးမယ်…
**ဟီး..အာတီသဲကို တိုင်တည်ပြီးရေးလိုက်တာ… လေသံမာသွားရင် အာတီသဲကို ပေါဒါ ဟုတ်ဝူးနော်… ရေးနေရင်းနဲ့ ကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကို ပြန်တွေးမိပြီး ဒေါသသံပါသွားတာ… မွမွ..အာတီသဲ…
has written 168 post in this Website..
နာမှ ပြောပြချင်လွန်းတာတွေများနေသလား အောက်မေ့တယ်
ဒီမှာလည်း တိုင်တည်ပြီး ပြောပြနေပြန်ပါပြီ ။
မွန်မွန်က တီသဲကို တိုင်တည်တာ ဦးသွားတယ်
နာလည်း တီသဲနာမည်ကို တိုင်တည်ပြီးရေးထားတာတစ်ပုဒ်ချိဒယ်ဟ
အမြဲတမ်း တွေးဆစရာ လေ့လာစရာ တွေပဲမို့ 
နာလည်း ခေတ်မီအောင် ရေးကြည့်တာ..
ငါလည်း သူရို့လို ဒိတ်မအောက် အောင် …
ဘူ့နံမယ်နဲ့ ရေးယင် ကောင်းမလဲ ???
လောလောဆယ် နမူနာ ရေးကျိလိုက်မယ် …
ပြောပြဂျင်နွန်းနို့ဘာ …. သည်းလေးရယ် …
ဒီရက်ပိုင်း ဆေးကုန်နေတာ.. ရွာထဲ ဝင်သောင်းကျန်းနေပါလား..
တိဒေါ့ဘာဘူးအေရယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ့ကတော့ ဆိုးသအေ့။ အဲဒါလေးဘဲပြောချင်တာပါ။ ပြော ရင်တော့ နိုင်ငံရေးတွေပါတော့မလားပဲ။ ညောင်ဥတူးရင်းညောင်မြစ်ပေါ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ တာဝန်ရှိ တဲ့ မော်တော်ပီကယ်ကြီးကမှ မြင်ပါလျှက်နဲ့ကျောခိုင်းပြီး စည်းကမ်းဖောက်နေတာကို အားပေး အားမြှောက် ကူညီနေမှတော့ ငါတို့ကဘယ်သူ့ကိုများ ဘာများထပ်ပြောနိုင်ပါတော့မလဲလေနော့။ ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲဆိုတာတော့ ငါလဲသေချာမသိပါဘူးအေ။
“လမ်းပေါ်က နိုင်ငံခြားသားတွေ လုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေတာ Tour Company နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတာလေး..နားလည်ပေးပါနော်..”
ဆိုတာလေးတော့ပြောချင်သား။ အခုဟာက လမ်းပေါ်ကနိုင်ငံခြားသားလုပ်တာမဟုတ်ပဲ တိုးကုန်ပဏီက တိုးကားတွေလုပ်နေတာမို့ တိုးကုန်ပဏီတွေကိုပဲ တိုင်တည်ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လဲ မပြောင်းလဲကြပဲ နေမြဲ ဆိုတော့လဲ ငါတို့ကခံမြဲပါပဲအေ။ ဘာများတတ်နိုင် အုံးမှာလဲလို့။
ဟီး… အိုက်ဒါ..အိုက်ဒါ… ခံလက်စနဲ့ ခံကြဦးစို့ရယ်…
ခိခိ..ဘာတဲ့.. ကမ္ဘာ့အလည်ပတ်သင့်ဆုံးနေရာတွေထဲက နံပါတ်ဘယ်လောက်ဆိုလား… အိမ်ရှင်တွေက သဘောကောင်းမှတော့ ဧည့်သည်တွေ ပျော်ပျော်ကြိးလာတာ မဆန်းပါဘူး..နော်…
ရုံးထဲထိုင်ပြီး ဘာမှမသိတာတွေတော့ ပေါ်ကုန်ပြီရယ်.. ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ့ အဲ့လောက်ဆိုးတယ်လား…
သူတို့တိုးကားတွေရပ်တော့ဖမ်းဘူးအေ့။ ငါတို့ကားတွေရပ်တော့ ၅၁ လမ်းထိလိုက်ရဒဂေါအေ။ အဲလိုဆိုးဘာဒယ်ဆိုနေမှ။ ငါကလဲ အဲလမ်းပဲမောင်းတတ်တာလေ။ အဲတော့ ခံရအုံးတော့မပေါ့အေ။
အင်း.. တိုးကားရယ်…ဂိုက်ရယ်… အွန်းလေ.. တိုးကုမ္ပဏီကိုပဲ ထင်ကြမှာပေါ့ရယ်…
guide တွေရဲ့ rules & regulations များ… ပြန်ရှာကြည့်ဦးမယ်…
သက်ငယ်စကား သက်ကြီးကြား… သင်ကြားနာယူ ဤဇမ္ဗူ…
… ညောင်ဥတူးရင်းညောင်မြစ်ပေါ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ …
မွသဲရဲ့ စကားပုံ အသစ်ကို မှတ်သားသွားပါဂျောင်း… ဟီ ဟိ
ဟီဟိ ပုတ်သင်ဥတူးရင်းညောင်မြစ်ပေါ်ကိုမွှားရေးထားဒါဘာ ဆောဒီး ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးဟီးးးးးးးးးးးးး
ညောင်ဥတူးရင်း ပုတ်သင်မြစ်ပေါ်သွားတယ်တော့ လုပ်လိုက်ပါ…
အခုဟာက လမ်းပေါ်ကနိုင်ငံခြားသားလုပ်တာမဟုတ်ပဲ တိုးကုန်ပဏီက တိုးကားတွေလုပ်နေတာမို့ တိုးကုန်ပဏီတွေကိုပဲ တိုင်တည်ရတာပေါ့။ …အဲ့ရာလေးကို ဟိုက်လိုက် လုပ်ချင်ပါတယ် ။
ဒီတစ်ခေါက် AMTA အစည်းဝေးကျရင်အမုန်းခံပြီး … သေချာပေါက်ပြောပေးပါ့မယ် ။ကိုယ်တွေကုန်ပဏီက ကားတွေကိုတော့ ..တပိုင်တနိုင်လေး ဆိုတော့ကာ ဂိုက်ကို အသေးစိတ်မှာပေးပါ့မယ် ။ ဘူတွေပျက်ပျက် ကိုယ်တွေမပျက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကလား ။ တီသဲ ..စိတ်ဆိုးနဲ့တော့နော်…ကားလဲဆေးခိုင်းနဲ့တော့ ။ နီကိုးကလပ်လဲပို့နဲ့တော့…အဟိဟိ
ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ ဆိုပြီ ပြောတာတွေ ရွာထဲ အခုတလောခေတ်စားနေတော့ ကျုပ်လည်းရေးအုံးမှဘဲ
ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ ရွာသားတို့ရေ ဆိုပြီးတစ်ပုဒ်
ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ ရွာသူတို့ရေ ဆိုပြီးတစ်ပုဒ် ပေါ့ဗျာ
ဦးခေါင်တို့ လဲ သိရတာပေါ့..
ကိုယ်တွေက ဘေးကနေပြီး အဖြူ တွေကို ပျာနေတာကိုမြင်လို့ပြော၇ပေမယ့် အကျိုးစီးပွားနဲ့သက်ဆိုင်လာတဲ့အခါ
လူဟာ သူရပ်တည်နေရာလေးတခုကိုတော့ တာဝန်ကျေအောင် လုပ်ကြရတာပါဘဲ..။
ခုမှ…စ…တာဆိုတော့ အသားမသေသေးလို့ ပါ..လုံလုံရေ..။
ပြောတာထက် ပြတာ ကြည့်ချင်မိဒယ် သာမီးလေး အမွန်ရယ်… ပေါနေကြာဒယ်.. ဟိုကောင် ငအံ မရှိဒုံ မျံမျံပြ… အပ်ချလောင်း…
လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ခရေစေ့တွင်းကျ သိသူက ရေးပြထားတာမို့ ဗဟုနဲ့ သုတ ရရှိသွားပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လုပ်ငန်းသဘာဝတွေ ကွဲပြားတတ်ကြတယ်။
ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်နေတဲ့သူတွေကသာ အဲဒီလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ချက်၊ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ဆိုတာတွေကို သိနိုင်တယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ အဆင်ပြေဖို့အတွက် အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေထဲက ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိပြီး စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့သူတွေက အဲဒီလုပ်ငန်းရဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ ဦးဆောင်ရင် အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေအားလုံး အဆင်ပြေ အကျိုးများကြရတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကျိုးရှာချင်လို့ အဖွဲ့အစည်းဝင်ပြီး လူကြီးနေရာယူထားကြသူတွေ ဦးဆောင်ရင် အဲဒီလုပ်ငန်းသမားတွေ အဆင်ပြေ အကျိုးများဖို့ မရှိဘူး။
​ရေးသာ​ရေး… အ​နော်​လည်း သူများ​တွေကို အားကျလို့ လိုက်​​ရေးကြည့်​တာ :-)
စိတ်​​လျှော့ပါတယ်​ အာတီဒုံရယ်​ … တစ်​ခါတစ်​ခါကျ​တော့ အချင်းချင်းဖြစ်​လျက်​နဲ့နားမလည်​​ပေး​တော့ စိတ်​တိုမိတယ်​
​ကြုံရတာ​တွေကပဲ စာ​တွေဖြစ်​လာတာ​ပေါ့​နော်​ … အချိန်​ကြာလာရင်​​တော့ အဆင်​​ပြေသွားမယ်​ထင်​တာပဲ
အုပ်​ထိန်းသူက သူဆို​တော့ :-) :-)
ဟုတ်တယ်သိလား… တစ်​ခါတစ်​ခါ ​ငွေထုပ်​ကိုင်​ဝင်​လာသူ​တွေရှိတယ်​ . . ဒီ​လောကအ​ကြောင်းကိုဘာမှမသိ … အကျိုးမပြစ်​​တွေကို မခွဲခြားတတ်​ဘဲ အ​ခြေအ​နေ​ကောင်းလာတာနဲ့ပဲ ​ငွေထုပ်​ဆွဲ ဝင်​လာလုပ်​တဲ့သူ​တွေကို မြင်တတ်​ဖို့အ​ရေးကြီးတယ် . . သူတို့က အ​ခြေအ​နေမ​ကောင်းရင်​ ​ငွေထုပ်​သိမ်းပြီးပြန်​ထွက်​သွားမှာ … ဒါ​တွေကို ခွဲခြားတတ်​ကြပါ​စေလို့ . . .
ကိုယ့် အလုပ်နယ်ပယ်က အခက်အခဲ ကိုယ်တွေ အသိဆုံးပေါ့လေ။
တစ်လှေလုံး ပုပ်စော်နံတော့တာ မဆန်းဘူးပေါ့။
လျှော့ပါအိ..မမရယ်… သူတို့က စင်ပေါ်ရောက်နေချိန်ကိုး….
အစအဆုံး ဖတ်မိတော့မှ ဇာတ်ရည်လည်တော့တယ်
ပြဿနာရယ်လို့တော့ မဟုတ် ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲကို တွေးမိသလောက် ပြောရရင်
ကျွမ်းကျင်သူ စပါယ်ရှယ်လိုက်တွေ နေရာချ မမှန်တာ
ဥပမာ (အရေးတကြီး ဖြေရှင်းရမဲ့ ကာစတန်မာ ဆားဗစ်လို့ နေရာမျိုးမှာ စကားပြောရင် တောင်မြောက်မကွဲ ခွေးအကြီး လှည်းနင်းသလို လူမျိုးကို နေရာချထားတာမျိုးပေါ့)
ကျနော်တို့ နိူင်ငံမှာ အမှန်တကယ်တော့ Pro တွေ တကယ်လိုအပ်နေတယ် ဒီစကားပြောလို့ ကြီးကျယ်တယ် မထင်ပါနဲ့ ခုပြန်လာပီး ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျကျလုပ်ကြည့်တော့ တကယ်သိရတယ် လုပ်ငန်းတခုမှာ တကယ့်ကျွမ်းကျင်သူ အမှန်လိုနေတာ။
လက်တွေ့ကျကျ ပြောရရင် ရန်ကုန် ၁၀မိုင်ကုန်းမှာ ရေဒါစခန်းတခုရှိတယ် ဂလက်ဆီအဖွဲ့ပေါ့ အဲ့မှာ ကိုရီးယားပညာရှင်တွေရှိတယ် ပရိုဂရမ်မာတယောက်က အသက်၂၇ဘဲရှိတယ် ၁၉နှစ်သားလောက်ကတည်းက စပါယ်ရှယ်လိုက်ဇ် ယူထားတာ။ အဲ့လူက သူ့ပရိုဂရမ်ကလွဲရင် ကွန်ပြူတာအကြောင်း ဘာတလုံးမှ မသိဘူး စိတ်လဲမ၀င်စားဘူး။
ကျနော်တို့ဆီမှာ အဲ့လိုလူမျိုးတွေ လုပ်ငန်းစုတွေထဲမှာ လက်တွေ့ပါဝင်နေရင် အခက်အခဲ တော်တော်များ ပြေလည်မယ်ထင်တယ်။ သူများနိူင်ငံမှာက သက်ဆက်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေစုပီးမှ ပရောဂျက်တခုကို အဖွဲ့တခုနဲ့လုပ်တာ။ ဒီမှာက ရှိတဲ့လူနဲ့ ဖြစ်အောင် အဆင်ပြေအောင် လုပ်နေကျတာ ….
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါကို ၂၆နှစ်တို့ အနှစ်၆၀တို့ ပုံရိပ်တွေပေါ် သွားတော့ ပုံမချလေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ဘဲဆိုင်တယ် …. တိုးရ်လုပ်ငန်းအပေါ် နားမလည်ပေမဲ့ ဘယ်အလုပ်မဆို အစုအဖွဲ့နဲ့ လုပ်လာရင် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာ စနစ်တကျနဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိူင်တဲ့ လူတွေလိုအပ်တာတော့ အမှန်ဘဲ။
ဟုတ်… ရုတ်တရပ်ကြီး blooming ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာတွေ အများကြီးပါတယ်… အခုဆို အရမ်းပွင့်နေပြီ… နယ်စပ်ပေါက်တွေလည်း အကုန်ဖွင့်ထားတယ်…. AFTA တွေလည်း လာတော့မယ်… ဒါပေမယ့် ဒီက infrastructure က ဘာမှ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး… man power တွေလိုတယ်.. ဒါပေမယ့် well train လုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူး.. ရှိတာနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်… အလုပ်ကို နားမလည်… professional မဖြစ်.. (ကိုယ်တွေလည်း မတော်ပါဘူး… ဒီအတိုင်းပါပဲ) ဒီကြားထဲ tourism ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ငွေထုပ်ပိုက်ဝင်လာသူ စီးပွားရေးသမားတွေက ဟိုတယ်တွေကို လေလံဆွဲ… service ဆိုတာကို မသိ.. cooperation ဆိုတာကို နားမလည်.. service field ကို စီးပွားရေးဆန်ဆန်လုပ် (demand များတော့လည်း လုပ်ကောင်းသေးတာပေါ့) …. ဒီလိုနဲ့.. ဒီလိုနဲ့…
ဟီးးးးး… ရေးရင်းနဲ့ လိပ်ပတ်မလည်ဘူး ဖြစ်တွားတယ်… ဂယ်တော့.. စိတ်ထဲမယ်.. သူတို့ ဂိုက်တွေလုပ်တာနဲ့ နာတို့တွေပါ ရောပါတယ်ဆိုပီး ဖြစ်တွားဒါရယ်…
ပြောချင်တာက (ပြန်ရှင်းဦးမယ်… ဟီး) တိုးကားတွေ ပိတ်တာ.. ဂိုက်ရဲ့ instruction ကြောင့်ပါလို့… ဂိုက်က ဧည့်သည်တွေကို ရှင်းပြပြီး ကားရပ်တဲ့နေရာအထိ ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင် ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးလို့… အဲဒီ ဂိုက်တွေကို ရုံးကလည်း ဒီလိုမျိုးတွေကအစ လိုက်ပြောနေလို့ မရဘူးလို့… သူတို့က သိပ်အချိုးမပြေကြဘူးလို့… … အာ့လေး ပြောချင်တာ… အာ့ကြောင့်…အာ့ကြောင့် ပါလို့.. နော်.. ချိတ်မချိုးနဲ့နော်…
တိုးကားတွေ ပိတ်တာ ဂိုက်တွေကြောင့်ဆိုပေမယ့် ..ကိုယ်တွေ တာဝန်မကင်းတာလဲ ၀န်ခံရပါမယ်ဗျာ ။ ကိုယ်တွေနဲ့ ဂိုက်တွေက တစ်ဖွဲ့ထဲပဲလေ ။ ပုံရိပ်တခုထဲအောက်မှာလုပ်နေကြရတာကလား ။ ဆိုတော့ကာ ..ကိုယ်တွေ ဘက်ကလုပ်နိုင်တာ တခုပဲ ရှိပါတယ် ။ တိုးအပ်တဲ့အချိန်ကျရင်သာ ..အပြုသဘောလေးဆောင်ပြီး အကြံပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောကြည့်ရင်ဖြစ်မလားပဲ ။ ဂိုက်တွေကလဲ စာတတ်ပညာတတ်ဆိုတော့ကာ နားလည်ပေးမယ်ထင်ပါတယ်… ။ ကားကြပ်တာကို သူတို့လဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မျှဝေခံစားရတာပဲ မဟုတ်လား… ။
ပုံ.ဆောရိုး …( အင်မတန်ပြည့်ဝ စိတ်ထားတည်ကြည် ခန့်ညားသားနားသော ထွားဘဲမန်နေဂျာ… ) အဟိဟိ …
နာပြောတာနားမထောင်ရင် လမ်းတ၀က်ဖြစ်နေပဇီ… ဂိုက်ချိန်းပစ်မီ…အဟိဟိ ..နာ့ရုံးမှာ နာကဆင်…အဟိဟိ
E guide တွေ သုံးနေသူများကို အားကျပါအိ…